Buy Anandamide (AEA) (94421-68-8) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker
N-arachidonoylethanolamine (AEA) ဟုလည်းလူသိများသော Anandamide သည်……မှရရှိသော fatty acid neurotransmitter ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည် Anandamide (AEA)
ဓာတုအမည် Arachidonylethanolamide; N-Arachidonoylethanolamine; Anandamide (20.4, n-6);
CAS အရေအတွက် 94421-68-8
အပြုံး CCCCCC = CCC = CCC = CCC = CCCCC (= O) NCCO
ရေဆူမှတ် 522.3 ± 50.0 ° C (ခန့်မှန်း)
သိပ်သည်းဆ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၀.၉၂ g / mL (lit) ။
ပျော်ဝင် အီသနော: ပျော်ဝင်နိုင်သည်
လြှောကျလှာ ၎င်းကိုမှတ်ဥာဏ်၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၊ လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ နာကျင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်မွေးဖွားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။
Anandamide (AEA) ဆိုတာဘာလဲ။
N-arachidonoylethanolamine (AEA) ဟုလည်းလူသိများသော Anandamide သည်အက်စစ်အက်စစ် neurotransmitter ဖြစ်သည်။ Eicosatetraenoic acid (arachidonic acid) ၏အောက်စီဂျင်ဓာတ်မဟုတ်သောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမှဆင်းသက်လာသောဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးခြောက်၏တက်ကြွစွာပါဝင်သော tetrahydrocannabinol ၏ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ anandamide ကို ethanolamine နှင့် arachidonic acid သို့ပြောင်းလဲပေးသော fatty acid amide hydrolase (FAAH) အင်ဇိုင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် Anandamide သည်အာရုံခံတွင် synthesized လုပ်ခြင်းဖြင့် Arachidonic acid နှင့် Ethanolamine တို့က calcium ion နှင့် cyclic monophosphate adenosidase တို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအောက်ရှိ condensation တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့် condensation တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။ မှတ်ဥာဏ်၊ နာကျင်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်မျိုးပွားခြင်းတို့အပါအ ၀ င်ကာယလှုပ်ရှားမှုများစွာတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတက်ကြွသောတ္ထုများ (Prostamides) ၏ရှေ့ပြေးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Anandamide သည်ပင်လယ်ရှိ urchin သမင်၊ ဝက်၏ ဦး နှောက်နှင့်ကြွက်အသည်းစသောသက်ရှိများစွာတွင်တည်ရှိသော်လည်း၎င်း၏အရေအတွက်သည်နည်းသည်။ သုတေသီများက Anandamide နှင့် N-oleoylethanolamine နှင့် N-Linoleylethanolamine (N-oleoylethanolamine) နှစ်မျိုးရှိသည့်ချောကလက်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ Anandamide သည်အချို့သောပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားသောအစေ့များ (အဖြူရောင်ပေါင်မုန့်)၊ အရက် (အထူးသဖြင့်နာတာရှည်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း)၊ သန့်စင်ပြီးသကြား၊ Trans fats၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတွင်ကြော်ထားသောအစားအစာများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများပါ ၀ င်သည့်အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောအစားအစာများတွင်ပင်တည်ရှိသည်။
Endocannabinoid system (ECS) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Anandamide သည်အခြားဆေးခြောက်ကဲ့သို့သောဓာတုဗေဒ 2-AG နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိ endogenous cannabinoid receptors နှင့်အတူ homeostasis ကိုထိန်းညှိသူအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ဤစနစ်သည်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါအားလုံးတွင်ရှိသည်။ Anandamide သည်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အပျော်အပါးကိုထိန်းညှိရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုဟန်ချက်ညီညီထိန်းထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုများ၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို endocannabinoid စနစ်မှထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ schizophrenia မှစိတ်ကျရောဂါအထိအမျိုးမျိုးသောရောဂါများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သော anandamide အဆင့်များနှင့်အတူလိုက်ပါကြောင်းလေ့လာမှုများကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
THC နှင့်ဆင်တူသည့် Anandamide သည် CB1R ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်စနစ်ကို“ အပြည့်အ ၀” ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတိုးတက်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာ Anandamide ၏ဤအရာအလုံးစုံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ pharmacologically ၎င်း၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ပျက်စီးခြင်းကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ခံရဖို့ပုံရသည်သတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ Anandamide ၏တွေ့ရှိမှုသည်ကုထုံးဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးမိသားစုတစ်စုလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။
Anandamide (AEA) အကျိုးကျေးဇူးများ
Anandamide သည် "Bliss molecule" ဟုလည်းလူသိများသောကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည့်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် neurotransmitter နှင့် endocannabinoid ဖြစ်သည်။
Anandamide ကင်ဆာဆဲလ်များ၏လျင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်အီတလီသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က anandamide သည် neurogenesis ကိုတိုးပွားစေပြီးအာရုံကြောဆဲလ်အသစ်များဖြစ်ပေါ်စေပြီးရင်သားကင်ဆာဆဲလ်များ၏တန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေသည်။
အန်နန်ဒီဒီ၏နဗ်ကြောအားဖွင့်နိုင်စွမ်း (နဗ်ကြောအသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း) သည်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကြွက်များတွင်အားရကျေနပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရရှိစေရန်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ဤသည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လူသားများနှင့်ကြွက်များအားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ anandamide သည်မြင့်မားသောစိတ်အခြေအနေများနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ထို့အပြင် anandamide ၏ CB1 နှင့် CB2 receptors များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းသည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာယန္တရားများစွာကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ မှတ်ဥာဏ်၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၊ လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှု၊ နာကျင်မှုထိန်းချုပ်မှု၊
anandamide တိုးမြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို(AEA) လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆင့်ဆင့်?
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် anandamide သည် neurotransmitter, vasodilator agent နှင့်လူ့သွေးသွေးရည်ကြည် metabolite နှင့်အခန်း၏ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် anandamide အဆင့်ကိုမြှင့်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းခန်ဓာကိုယ်အတွင်းရှိခန်ဓာကိုယ်အတွင်းရှိခန်ဓာကိုယ်အတွင်းရှိခန်ဓာကိုယ်အတွင်းရှိခန်ဓာကိုယ်အတွင်းရှိခန်ဓာကိုယ်ခန်ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ခေတ္တတိုးမြှင့်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။
လေ့လာမှုကမိနစ် ၃၀ သာပြေးပြီးနောက်လူနှင့်ခွေးနှစ် ဦး စလုံး၏ anandamide (AEA) ပါဝင်မှုတိုးလာသည်။ သင်အကျိုးအရှိဆုံးရလိုလျှင်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုမကြာခဏပြုလုပ်ပါ။
ချောကလက်နက်သည်ကျန်းမာသောချောကလက်တွင် theobromine ပိုမိုမြင့်မားသည်။ theobromine သည် ဦး နှောက်တွင်း anandamide ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
- အနက်ရောင် truffle စားခြင်း
အနက်ရောင် truffle (မှိုအနက်ရောင်) တွင် anandamide ပါဝင်သည်။ မှိုသည် Anandamide ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမသုံးနိုင်ပါက၎င်းကိုတိရိစ္ဆာန်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်၎င်းင်း၏အထူးဖော်စပ်ထားကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
သုတေသနပြုချက်အရလူတစ် ဦး သည်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု (“ စီးဆင်းနေသော” သို့မဟုတ်“ ဒေသတစ်ခုတွင်” ဟုခေါ်သော) ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းရှိပါကသင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမည်သို့မဟုတ်သင်၏ ဦး နှောက်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးနိုင်ရုံသာမက၎င်းသည် ထိုကဲ့သို့သော serotonin, dopamine, endorphin နှင့် anandamide ကဲ့သို့သောများစွာသောဓာတုပစ္စည်းများ။
ထို့အပြင်လက်ဖက်၊ နံနံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် anandamide ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Berger, Alvin; Crozier, Gayle; Bisogno, Tiziana; Cavaliere, Paolo; Innis, Sheila; Di Marzo, Vincenzo (မေလ 15 ရက်, 2001) ။ "Anandamide နှင့်အစားအစာ: အစားအသောက် arachidonate နှင့် docosahexaenoate ၏ပါဝင်မှု piglets အတွက်သက်ဆိုင်ရာ N-acylethanolamines ၏ ဦး နှောက်အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ" အမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 98 (11): 6402- Bibcode: 2001PNAS ... 98.6402B ။ Doi: 10.1073 / pnas.101119098 ။ PMC 33480. PMID 11353819 ။
El-Talatini MR, Taylor AH, Konje JC (Aprilပြီ ၂၀၁၀) ။ “ ရာသီလာခြင်းသံသရာအတွင်း endocannabinoid၊ anandamide, sex steroids နှင့် gonadotrophins တို့၏ပလာစမာအဆင့်များအကြားဆက်နွယ်မှု” မြေသြဇာ။ မြုံ။ 2010 (93): 6- Doi: 1989 / j.fertnstert.10.1016 ။ PMID 2008.12.033 ။
Habib, Abdella M ကို။ ; Okorokov, Andrei L ကို။ ; ဟေးလ်, မMatthewဲ N ကို။ ; Bras, ဟိုဆေး T ကို။ ; Lee က Man-Cheung; လီ, Shengnan; အတင်းအဖျင်း, ရှမွေလသည် J ကို။ ; ဗန် Drimmelen, မာရီ; Morena, မာရီယာ (မတ်လ 2019) ။ "မြင့်မားသော anandamide ပြင်းအားနှင့်နာကျင်မှုအာရုံမခံစားနိုင်သောနှင့်အတူလူနာအတွက်ဖော်ထုတ်တဲ့ pseudogene အတွက် Microdeletion" ။ မေ့ဆေးဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 123: e249- Doi: 10.1016 / j.bja.2019.02.019 ။ PMID 30929760 ။
Mahler SV, Smith KS, Berridge KC (နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇) ။ "အာရုံခံအပျော်အပါးအတွက် Endocannabinoid hedonic hotspot: နျူကလိယ၌ anandamide shell ကို accumbens shell ကိုမွှေးသောဆုလာဘ်၏အကြိုက်" ပိုကောင်းစေပါတယ် "။ Neuropsychopharmacology ။ 2007 (32): 11- Doi: 2267 / sj.npp.10.1038 ။ PMID 1301376 ။
Mechoulam R ကို, Fride အီး (1995) ။ "ဒီ endogenous ဦး နှောက် cannabinoid ligands, အ anandamides ဖို့ခင်းကျင်းသောလမ်း" ။ Pertwee RG (ed ။ ) ၌တည်၏။ Cannabinoid အဲဒီ receptors ။ ဘော်စတွန်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း။ စစ။ 233- ISBN 978-0-12-551460-6 ။
Mallet PE, Beninger RJ (1996) "ဒီ endogenous cannabinoid အဲဒီ receptor agonist anandamide ကြွက်များတွင်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်း" ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။7(3): 276- Doi: 10.1097 / 00008877-199605000-00008 ။